Lalatiana Ravololomanana : Niantso ny CFM sy HCCDDED -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Ravololomanana : Niantso ny CFM sy HCCDDED
11/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nitondra ny fanahiany teny amin’ny CFM na ny filankevitry ny fampihavanana malagasy, sy ny HCCDDED filankevitra ambony ho an’ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tan-dalàna i Lalatiana Ravololomanana omaly. Nambaran’ny filoha mpanorina ny antoko Manda ho an’ny firaisam-pirenena, fa ahiana ny tsy hipetrahan’ny fitoniana mandritra ny fanatanterahana ny fifidianana.
Ho an’ ny tetsy amin’ ny CFM dia ny filohan’ny kaomision’ny fanorenana ifotony no nandray an’i Lalatiana Ravololomanana, nambarany tamin’izany ny ahiahy noho ny fahabetsahan’ny fanehoan-kevitra feno fihantsiana ka hiteraka korontana. Anjaran’ny CFM feno no mandray andraikitra amin’ny fametrahana ny fitoniana hoy i Lalatiana Ravololomanana, ary tsy tokony hijanona fotsiny amin’ny fametrahana ilay fitsipi-pitondran-tenan’ireo kandidà izy ireo. «Ny CFM nomen’ny lalàna fahefana hametraka ny fitoniana, nefa dia tsy nandray ny andraikiny araka ny tokony ho izy. Tony ve ny firenena, inona no tokony hatao manoloana izao zava-misy izao?» hoy ny fanazavany. Mazava ny voalazan’ny lalàna hoy i Lalatiana Ravololomanana fa anjara asan’ny CFM ny miasa mba hipetrahan’ny fitoniana, « anjaran’ny CFM ny mametraka tontolo politika tony, mba ahafahan’ny andrim-panjakana rehetra miasa anatin’ny filaminana. Ny zava-misy anefa dia mifampisalovana andraikitra ny HCC sy ny filankevi-panjakana, ary tsy miafina ihany koa ny fandaniana ataon’ny HCC. Noho izany mametraka fanontaniana izahay hoe inona no ataon’ilay CFM. Charte de bonne conduite hoe ataony, tsy ampy izay amin’izao zava-misy eto amin’ny firenentsika izao».
Tsy nijanona teo anivon’ny CFM ihany ny fikaroham-bahaolana noho ny tsy fitoniana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao, fa nitohy teny amin’ny HCDDED indray. Nambaran’i Lalatiana Ravololomanana fa anjara asan’ny HCDDED ny fampanjakana ny tany tan-dalàna sy ny demokrasia araka ny voalazan’ny lalàna 2015-001. Voalazan’ny andininy fahefatra anatin’io lalàna io, fa manan-jo hiantso ny HCC izy ireo, raha misy tsy fahatomombanana. Ny taratasy napetraky ny Manda ho an’ny firaisam-pirenena noho izany, dia ny tokony hiantsoan’ ny HCDDED azy ireo noho ny fihoaram-pefy. Nambaran’i Lalatiana Ravololomanana fa, « tokony hisy ny fiantsoana ny HCC, manoloana ny fanapahana avoakany. Izay lasa fanapahana politika, fa tsy araka ny lalàna. Tsy ny HCC ihany no nangatahinay hanaovana fiantsoana, fa ny governemanta sy ny minisiteran’ny Atitany ihany koa. Anton’izany ny fiandaniana izay miteraka tsy fahatokisan’ny rehetra azy ireo » hoy hatrany i Lalatiana Ravololomanana. Farany fa tsy ny kely indrindra no tokony hisian’ny antso ho an’ ny kandidà “Tokony antsoin’ny HCDDED izy ireo hanaja ny etika. Amin’izao dia efa misy kandidà misora-tena fa izy no lany eo. Amin’ izany dia efa miantso ny pomba azy io kandidà io, tsy hanaiky ny voka-pifidianana, raha tsy izy no lany eo”, hoy hatrany ny fanazavany.
Teny ampamaranana dia nilaza i Lalatiana Ravololomanana fa tsy tokony atao ambanin-javatra ny fametrahana ny fitoniana. Isan’ny tokony hojerena izao ny nambaran’ny Amiraly hoy izy, fa misy ireo izay mampiditra fitaovam-piadiana antsokosoko teto amin’ny firenena. Noho izany hoy izy dia andrasana ny fandraisana andraikitra avy amin’ireo sehatra ireo. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izao dia efa nampiseho izay tamin’ny fametraham-pialany. Na dia novoizina aza fa tsy hiala izy, izany fihetsika izany dia feno finiavana hametraka ny fitoniana.